စာသားတွေက ကြမ်းထော် နေတာပဲ မိုက်တယ် ရေးချက် ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီး ပြန်တင်တာပါ … – Let Pan Daily
သိန်း(၈၀၀၀)တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောက်ျားကို လိုချင်ရင် …..ကိုယ် ကိုယ်​တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်​ရာ ရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်​ရာ ပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ ..
ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို …. မိဘက လည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား
အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ post ကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါ မှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့ ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ်
Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။ လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန်​ YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လက်တွဲဖော် အစစ်ကိုသာရှာကြပါ သားတို့။
မင်းဆီမှာငွေတသောင်းပဲရှိ မှန်းသိရက်နဲ့ ငွေ၈၀၀၀သုံးရက်တဲ့မိန်းမဟာ မင်းသိန်း၁၀၀ရှိရင် သူ သိန်း၈၀ဖြုန်းဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်ဘူး …..
မင်းမှာရှိတဲ့ငွေ၁၀၀၀၀ကို မုန့်၂၀၀၀ဖိုး လောက်စားပြီး ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံကိုမင်းအဆင်ပြေဖို့ အလိုက်တသိချန်ထားပေးတဲ့မိန်းမမျိုးသာ လက်တွဲဖော်ဖြစ်သင့်တာပေါ့။
ဘူဖေးအဝစားဘယ်လောက် ဟိုဆိုင်​မှာ စားရင် ဘယ်လောက် ဒါတွေ Share ပြီး “လိုက်ကျွေး ကိုကို” ဆိုတာမျိုးထက် “ကို့ကို သဲဒါမျိုးလေးချက် ကျွေးမယ်” “ကို ဒါမျိုးလေးကြိုက်လား သဲချက် ပေးမယ်” ဆိုတာပဲ ရေးသင့်တယ်​ …. တင်သင့်တယ် ….. Ro သင့်​တယ်​ …
မိန်းကလေး ဖိနပ်ကို ဒူးထောက် ပြီးစီးပေးတဲ့ post တွေကို ထိုင် Share ပြီး ဒါမျိုးမှ Ro တယ်ထင်နေတာ မျိုးထက်
ရွှေတိဂုံဘုရား ကို ဖိနပ်လေး ကိုယ်စီကိုင်ပြီး လှေကားထစ် တွေပေါ်တက်တိုင်း မင်းမျက်နှာလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့် ပြီး ပီတိဖြစ်မယ့်မိန်းကလေးမျိုး ကို သာရှာသင့်တယ် ….
ကားသိပ်မက်တဲ့ မိန်းမမျိုးဟာကားရှိတဲ့လူတွေ့ရင်ပါသွားမှာပဲ….. ကားစုတ် ရှိတဲ့သူဆီကနေ နောက်ဆုံးပေါ် ကား​ကောင်းရှိတဲ့သူဆီပါသွားမှာပဲ …..
မင်းကိုတော့ ကျော်သူ့ ကားပေါ် တင်ရင် တင်ပေးလိမ့်မယ် ……သူကတော့ ဇိမ်​ခံကားပေါ်ကနေမင်းကိုတာ့တာပြသွား မှာ​အ​သေချာဘဲလေ …..
စည်းစိမ်​ချမ်းသာတာကိုမက်တဲ့မိန်းမဟာ …. မင်းထက်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ပါသွားမှာ … Six pack ကိုမှကြိုက်တဲ့မိန်းမဟာ ….. မင်းဗိုက်ပူလာ တဲ့ အချိန်ထားခဲ့မှာပဲ …
ရုပ်ချောတာကြိုက်တဲ့မိန်းမဟာ မင်းအိုမင်းလာချိန်….မင်းထက်ပိုမိုချောမောတဲ့သူနဲ့ ​တွေ့ရင်ပါသွားမှာပဲ …မင်းမှမင်းဘဲဖြစ်နေလို့ မင်းကို ချစ်နေတဲ့ မိန်းမမျိုးကသာမင်းကိုတသက်လုံးချစ်နေမှာ ​သေချာတယ်။
မင်းဆီမှာရှိတဲ့ မင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို အပြစ်မြင် ငြူစူစောင်းမြောင်းပီး​သောက​တွေ​ပေနေမယ့်အစား မင်းမလုပ်နိုင်တာတွေကို သူဝိုင်းကူပြီးမင်းလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတာတွေကိုအပြုံးတွေနဲ့ချီးကျူးနေမယ့်မိန်းမမျိုးကသာလျှင်မင်းကိုတဘဝလုံးစာလက်တွဲထားနိုင်မှာပါ …..
ချောကလတ်နဲ့ ပန်းစည်းမျှော်နေတာထက် မင်းစာမေးပွဲ မင်းအလုပ် …. မင်းရဲ့ဘဝ​နောင်​​ရေး​တွေအတွက် ဘုရား ဆွမ်းတော်ကပ် ပန်းပူဇော်ပြီး မင်းကွယ်ရာမှာ မင်းတဦး တည်းအတွက် သစ္စာရှိရှိ ဆုတောင်းပေးနေမယ့်မိန်းမမျိုး ကသာ အမိနဲ့တူသောမိန်းမ ….
ညီမနှင့်တူသောမိန်းမ … ကျွန်​နဲ့တူ​သောမိန်းမ မျိုးပါ။ အဲတော့ ၃သောင်းတန် ပီဇာတစ်ပြားစားရဖို့အငတ်ခံငွေ စုရဦးမယ့်အစား …. ၁၀၀ ကျပ်​တန် ဆမူစာလေးစားပြီး အပိုငွေကိုစုကြပါ …
အောငျလပှဲ ကို မိမိဖုနျး နဲ့ တိုကျရိုကျ မကွညျ့လိုကျရမှာ မပူနဲ့တော့ တိုကျရိုကျ ကွညျ့နညျးသဈ (၂)နညျး (ရှယျထားပေးပါအုံး …)
ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် (နေရာ ကွက် ၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည် )